यस उपकरणले लिनक्ससँग राम्रोसँग काम गर्दैन - मैले कुन लग्समा हेर्नु पर्छ? | लिनक्सबाट
En लिनक्स la समुदाय तपाइँलाई सहयोग गर्न सँधै उपलब्ध छ। प्रत्येक वितरणको फोरम, विकी, IRC च्यानलहरू, इत्यादि छन्। जहाँ तपाईं जहिले पनि सहयोगी हात फेला पार्न सक्नुहुनेछ; जहाँसम्म, अघिल्लो समस्या छ: कुन लग (रेकर्ड) मैले साझेदारी गर्नु पर्छ र के जानकारी मैले देखाउनु पर्छ ताकि तपाईं मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, यो भन्नु उपयुक्त छ कि तपाईले साझा गर्नु पर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी:
1.- तपाईंले के गर्नुभयो सबै असफल हुनु अघि।
2.- तपाईंले के हुने आशा गर्नुभयो। अर्को शब्दमा, कसरी सबै कुरा काम गर्न सक्थ्यो भन्न सक्षम हुन यो "ठीक" भयो।
3.- वास्तवमै के भएको थियो भन्ने विवरण।
त्यसोभए, उदाहरणका लागि, यी प्रश्नहरूको सही प्रकारले कसरी सोध्ने यहाँ केही उदाहरणहरू छन्।
मैले उबन्टु १०.०10.04 (x86 version संस्करण) लाई मेरो डेल अप्टिहुइज 312१२ ल्यापटपमा स्थापना गरे। जब म लगइन गर्छु, मेरो वाइफाइ नेटवर्क कार्ड नेटवर्क प्रबन्धकले पत्ता लगाएन त्यसैले यसले वाई-फाई नेटवर्कहरू देखाउँदैन, यद्यपि वायर्ड नेटवर्क जडान ठीक छ। ।
म मेरो सिस्टम laptop10.04 ल्यापटपमा उबुन्टु १०.०76 नेटबुक संस्करण प्रयोग गर्दछु। जब म हेडफोन प्लग गर्छु, ध्वनि तिनीहरूको माध्यमबाट तर स्पिकरहरू मार्फत बाहिर आउँदछ।
म उबन्टु १०.०10.04 प्रयोग गर्दै छु। मैले मेरो nvidia GeForce FX 5200२००० को लागी निजी ड्राइभरहरू स्थापना गर्न प्रोग्राम प्रयोग गर्‍यो। अब जब मेशिन रिबुट गर्छु प्रणाली उब्बिएको छ र उबन्टु स्प्ल्याश स्क्रिन देखाउँदा कालो स्क्रिन देखाउँदछ।
ठीक छ, हामीले पहिले नै केहि उदाहरणहरू देख्यौं कि कसरी तपाईंको समस्या वर्णन गर्ने। जहाँसम्म, हार्डवेयर समस्याहरूसँग व्यवहार गर्दा यस्तो सम्भावना हुन्छ कि ती तपाईंको मेसिनको विशिष्ट समस्याहरू हुन् र जसले तपाईंलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्छन् उनीहरूले समस्यालाई दोहोर्याउन सक्दैन किनभने उनीहरूसँग समान हार्डवेयर छैन। त्यस कारणका लागि, यो प्रणालीको केही लगहरू (लगहरू वा रेजिस्टरहरू) समावेश गर्न एक "स्वस्थ बानी" हो जसले तपाईंलाई सहयोग गर्न खोज्नेहरूलाई थप उपकरणहरू दिन सक्दछ।
2 भिडियो कार्ड समस्याहरू
3 अडियो कार्ड समस्याहरू
सुडो lspci -nn सबै पत्ता लागेका PCI उपकरणहरूको सूची गर्दछ। यसमा सबै विस्तार कार्डहरू (भिडियो कार्डहरू, वाइफाइ, आदि) समावेश छन् जुन तपाईंको मेसिनमा छ, कर्नेललाई उनीहरूसँग कुराकानी गर्न उपयुक्त ड्राइभर छ कि छैन भन्ने पर्वाह नगरी। यो जानकारी धेरै उपयोगी छ, विशेष गरी ती केसहरूमा जहाँ तपाईं १००% निश्चित हुनुहुन्न जुन तपाईंको मेसिनमा हार्डवेयर छ।
lsusb तपाईंको मशीनमा जोडिएको सबै USB उपकरणहरूको सूची दिनुहोस्। फेरि, यो जानकारी केसहरूमा उपयोगी हुन्छ जहाँ तपाईं १००% निश्चित हुनुहुन्न जुन तपाईंको मेसिनमा हार्डवेयर छ। यसले उपकरण सही जडान भएको वा यो हार्डवेयर समस्या (जलेको इत्यादि) होईन भनेर प्रमाणित गर्न पनि कार्य गर्दछ।
/ var / लग / यूदेव y / var / लग / dmesg तिनीहरूमा कर्नेलले पत्ता लगाएका सबै यन्त्रहरूको बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ। यी लग फाइलहरू प्राय: धेरै ठूला हुन्छन्। जबसम्म तपाइँलाई थाहा हुँदैन कि कुन विशिष्ट भागले काम गर्दछ, यो लि links्कको रूपमा समावेश गर्न सुविधाजनक छ र तिनीहरूलाई तपाइँको प्रश्नको अंशको रूपमा टाँस्न।
भिडियो कार्ड समस्याहरू
/var/log/Xorg.0.log यो X सर्भरको लग फाइल हो (एउटा जसले लिनक्समा सबै ग्राफिक्सहरू ह्यान्डल गर्दछ)। यो सबै केसहरूमा कार्य गर्दछ जहाँ तपाईंलाई भिडियो कार्डको साथ समस्याहरू छन्।
LIBGL_DEBUG = verbose glxinfo तपाइँको मेसिनले थ्रीडी ग्राफिक्स त्वरणलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनेर जानकारी प्रदर्शन गर्दछ, जुन यस्तो अवस्थामा उपयोगी छ जहाँ यो समस्या छ (उदाहरणका लागि, युनिटी र अन्य प्रोग्रामहरूसँग समस्याहरू जसमा थ्रीडी ग्राफिक्स एक्सेलेरेसन आवश्यक पर्दछ)।
lspci -nn | grep vga सबै पत्ता लागेका भिडियो कार्डहरूको सूची प्रदर्शन गर्दछ। यो सामान्यतया त्यस्ता केसहरूमा उपयोगी हुन्छ जहाँ तपाईंसँग कुन कार्ड छ भन्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न।
xrandr पत्ता लगाइएका यन्त्रहरूका लागि उपलब्ध स्क्रीन रिजोलुसनहरूको सूची प्रदर्शन गर्दछ। "+" प्रतीकको साथ चिन्ह लगाईएको विकल्प सिफारिस गरिन्छ, जब कि तारांकनको साथ एक हामीले प्रयोग गर्यौं। यो जानकारी प्राय: मनिटर भन्दा बढी जडान गर्ने प्रयास गर्दा सहयोगी हुन्छ।
अडियो कार्ड समस्याहरू
/ proc / asound / कार्डहरू सबै पत्ता लागेका अडियो उपकरणहरूको सूची गर्दछ। यो लग फाइल समावेश गर्न यो सँधै उपयोगी हुन्छ।
/ proc / asound / कार्ड0 / कोडेक ० ० यसले पहिलो साउन्ड कार्डको बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ, इनपुट / आउटपुट पोर्टहरूको बारेमा जानकारी सहित। यदि तपाईंको समस्या एक उपकरण जडान गर्न सम्बन्धित छ जुन राम्रोसँग पत्ता लगाइएको छैन वा राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने तपाईंले यो लग फाइल समावेश गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंसँग एक भन्दा बढि ध्वनि कार्ड स्थापना भएको छ भने, त्यहाँ एक भन्दा बढी डाइरेक्टरी / प्रोक / असौंड / कार्ड हुनेछ ???
अन्तमा, कुनै पनि मेशीन, उपकरण वा परिधीय किन्नु अघि, यसलाई जहिले पनि हेर्नका लागि सुझाव दिइन्छ हार्डवेयर अनुकूलता सूची प्रयोगकर्ताहरू र कम्पनीहरूले बनाएको जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ डिस्ट्रो विकास गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » फाईललिटको UseLinux » यस उपकरणले लिनक्ससँग राम्रोसँग काम गर्दैन - मैले कुन लग्समा हेर्नु पर्छ?
नमस्कार, डेस्डेलिन्क्सका साथीहरू, हालसालै स्थापना गर्नुहोस्; यो तोशिबा सेटेलाइट सी 845 for ल्यापटपको लागि पेन्ड्राइभमा आर्चलिन्क्स र सर्वप्रथम, सबै राम्रो छ, जबसम्म म बुझ्दिन, तर USB मा स्थापना (UEFI मोडमा बुट र SECURE BOOT सक्षम), UEFI द्वारा पहिचान हुनबाट रोकियो र बाट त्यहाँ, म अब यो सुरु गर्न सक्दिन। अर्को समस्या टचप्याडले काम गरेनन्। तर म यो वितरणसँग परीक्षण गर्दैछु: (UEFI अक्षम मोडमा बुट गर्नुहोस्) उबुन्टु, फेडोरा, डेबियन र टचप्याड जे भए पनि काम गर्दैन। म यससँग समस्याहरू बनाउँदिन, मलाई माउस र समाप्त विषय थप्नको लागि यो पर्याप्त छ; तर कुनै श doubt्का बिना यो उपकरण (टचप्याड) लाई काम गर्न उचित हुन्छ।
शुभकामना, र कुनै श doubt्का बिना यो लेख GNU- लिनक्सको साथ मद्दत चाहनेहरूले विचार गर्नुपर्छ।
युजरलिन्क्सलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार! हुनसक्छ तपाईले तलका लिंकहरू मध्ये एकमा समाधान फेला पार्न सक्नुहुन्छ:
यस प्रकारका केसहरूमा म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि खोजशब्दहरू हाम्रो खोज ईन्जिनमा खोजी गर्नुहोस् (माथि दायाँ हेर्नुहोस्)। यी बर्षहरूमा हामीले हजारौं लेखहरू लेखेका छौं र सम्भवत ती मध्ये केहीले तपाईंको समस्याको समाधान ल्याउन सक्छ।
स्थापना लग: आर्च्लिनक्स